Bit By Bit - Running nemaresiphi - 4.5 Ukwenza kwenzeke
Ngisho noma ungenayo usebenza enkampanini enkulu tech ungaqalisa ukuhlolwa digital. Ungakhetha ukukwenza wena ngokwakho noma umlingani nothile ozokwazi ukukusiza (futhi ngubani ungasiza).
By ngaleli phuzu, ngithemba ukuthi wena ejabulile mayelana amathuba ukwenza siqu nemaresiphi yakho digital. Uma usebenza enkampanini enkulu tech ungase kakade ukwenza lokhu kucwaninga sonke isikhathi. Kodwa, uma ungenawo usebenza enkampanini tech ungase ucabange ukuthi awukwazi ukusebenzisa ukuhlolwa digital. Ngenhlanhla, lokho kuyiphutha; nge lokusungula kancane futhi umsebenzi onzima, wonke umuntu angakwazi ukusebenzisa i-experiment digital.
Njengesinyathelo sokuqala, kubalulekile ukuthi ukuhlukanisa phakathi tindlelanchubo ezimbili eziyinhloko: ukwenza ngokwakho noma ibambisene ne enamandla. Futhi, kukhona ngisho umbhangqwana ngezindlela ezahlukene ukuthi ungakwazi ukukwenza wena ngokwakho; ungakwazi ulinge ezindaweni ekhona, ukwakha sokuhlolwa kwakho siqu, noma ukwakha umkhiqizo wakho siqu nokucwaninga okuphindaphindiwe. Mina ngizoba ukufanekisa kulezi zindlela eziningi izibonelo ngezansi, futhi ngenkathi usafunda ngabo nawe umqaphele kanjani ukusondela ngamunye unikeza ukudela okuthile endleleni Ubukhulu ezine eziyinhloko: izindleko, control, ngokoqobo, futhi izimiso zokuhle (Figure 4.11). Ayikho indlela engcono kunazo kuzo zonke izimo.
Figure 4.11: Isifinyezo ukudela okuthile ngenxa ngezindlela ezahlukene ukuthi ungenza ukuhlolwa kwakho kwenzeke. By izindleko I mean kubiza ukuba umcwaningi mayelana isikhathi nemali. By control ngiqonde ikhono lokwenza lokho ofuna mayelana ukuheha ababambiqhaza, eqenjini, edlulisela zokwelapha, nokukala nemiphumela. By ngokoqobo ngiqonde elingakanani imvelo isinqumo umentshisi labo nazo ekuphileni kwansuku zonke; wazi ukuthi ngokoqobo okusezingeni akubalulekile for testing eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma njalo (Falk and Heckman 2009) . Ngezimiso Zokuhle I mean ikhono labacwaningi enezinhloso ezinhle ukuphatha zezinselele zezindinganiso ezingase ziphakame.